Biza iZenzo zeZenzo eziBalaseleyo kwi-infographic
Yenza kunye nezinto ekungafanelekanga ukuba uzenze ngokuphumelelayo ukuba ubize isenzo
NgoLwesithathu, Matshi 7, 2012 Douglas Karr
Abantu baseLitmus badibanise le inforgraphic kwi Yenza kunye nezinto ekungafunekiyo ukuba ube nefowuni eSebenzayo eSenzweni (CTA). Ayisebenzi kuphela kwintengiso ye-imeyile, nangona. Ii-CTA ezinkulu kunzima ukuza kwiwebhu-kodwa ziyafuneka! Ukuba uyafuna uku bonelela ngendlela yokubandakanya abafundi bakho, Kuya kufuneka ube neefowuni ezinkulu zokwenza isenzo!
Ukusuka kwi-infographic: Xa usebenzisa i-imeyile ukunxibelelana nabafundi bakho, zininzi iindlela zokuzibandakanya kunye nokukhuthaza. Imifanekiso, isicatshulwa, unikezelo, iitshathi, kunye namakhonkco kunceda ukwahlula amaphulo akho kunye nomdla wababhalisi, kodwa ukubenza bavule i-imeyile yakho sisiqingatha semfazwe. Inyathelo elilandelayo kukukhuthaza isenzo ngokunyanzela umnxeba ukuba uthathe isenzo (i-CTA). Xa kufika ixesha lokucwangcisa iphulo lakho elilandelayo, landela ezi ngcebiso ukuze ubandakanye ii-CTAs ezikhuthaza isenzo kwii-imeyile zakho ngendlela elungileyo (kwaye uphephe indlela engeyiyo).
tags: umnxeba kwisenzoubiza isenzoctai-imeyile infographickwi-infographici-litmus
Ukuvavanywa kweWebhusayithi ngaphaya kwephepha lokufika
IGoogle + yeShishini